မြန်မာ့သားကောင်း: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကြံခိုင်ရေးပါတီ
ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထုတ်ပြန်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းအနေဖြင့် Southern Weekend (China)သို့ အမှန်တကယ် ပြောကြားခြင်း ရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် အချက်သုံးချက်ပါရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ (၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် Southern Weekend (China) ဟု ဖော်ပြထားသော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ရေးသားဖော်ပြချက်များအား Internet စာမျက်နှာများပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ ဂျာနယ်များတွင်လည်းကောင်း ဖော်ပြလျက်ရှိနေကြပြီး အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းမှုများလည်း ရှိနေကြပါသည်။ (၂) အဆိုပါ ရေးသားဖော်ပြချက်များသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းမှ အမှန်တကယ် ပြောကြားခဲ့မှုများဖြစ်ပါက ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ ပုဂ္ဂလိက ပြောဆိုချက်များသာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ သဘောထားများ မဟုတ်ပါ။ (၃) ဦးအောင်သိန်းလင်းအနေနှင့် အမှန်တကယ် ပြောကြားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ တွေ့ရှိချက်များအပေါ်မူတည်၍ ပါတီစည်းကမ်းအရ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်'' တို့ဖြစ်ကြသည်။
At 7/29/2012 12:30:00 PM
People never likes USDP Party(Past, Present and Future)as for their history was full of stupid matters. First, they formed as Social Organizations, then, change to Political party. No one can't do like this as for unfair manners by stupid military leaders. This article is good, but, not 100% correct whenever USDP does, they all will be gone in 2015 election if it is real free and fair. Again, People always never like them before. They just stole the votes shamelessly in 2010 election. There are many Aung Thein Linns in their party (USDP).